Efatra mihodina ankehitriny
Torohevitra dimy hanatsorana ny sensor
Soso-kevitra 1 - Atombohy amin'ny fitaovan'ny bus Ao amin'ny dingana voalohany, ny injeniera dia tokony handray fotoana voalohany hifandraisana amin'ny sensor amin'ny alàlan'ny fitaovam-pitaterana bus hametra ny tsy fantatra. Fitaovana fiara fitateram-bahoaka mampifandray solosaina manokana (PC) amin'ny I2C an'ny sensor, SPI na ireo protokol hafa mamela ny sensor “t ...
Ny isan'ny sensor dia nirohotra nanerana ny tany sy ny fiainan'ny olona, ​​manome hafatra am-peo isan-karazany erak'izao tontolo izao. Ireo sensor mora vidy ireo no hery manosika ny fampandrosoana ny Internet of Things (IoT) ary miatrika ny dizitaly ...
Fahalalana fampianarana fototra momba ny sensor (6)
Sensitivity sensitive Sensitivity dia manondro ny tahan'ny fiovan'ny output Δ y amin'ny fiovan'ny fidirana Δ x eo ambanin'ny fiasan'ny sensor. Io no tehezan'ilay fiolahana mampiavaka ny fahan'ny output. Ny fahatsapana S dia tsy miova raha misy fifandraisana misy eo amin'ny sensor's ...
Fahalalana fampianarana fototra momba ny sensor (5)
Ny fahamendrehan'ny Sensor Matetika, ny tena vokatra mivaingana an'ny sensor dia fiolahana bara fa tsy tsipika mahitsy. Amin'ny tena asa, mba hahatonga ny metatra hanana famakiana mizana mitovy, ny tsipika mahitsy mahitsy dia matetika ampiasaina hanehoana ny fihodinan'ny toetra mampiavaka azy, ary ny lin ...
Fahalalana fampianarana fototra momba ny sensor (4)
Fihetsiketsehana Sensor Ny antsoina hoe toetra mavitrika dia manondro ny toetran'ny fivoahan'ny sensor rehefa miova ny fidirana. Amin'ny fampiharana, ny toetra mampiavaka ny sensor dia matetika no aseho amin'ny valin'ny valiny fampidirana mahazatra. Izany dia satria ny sensorR ...
Fahalalana fampianarana fototra momba ny sensor (3)
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-06-16
Ny toetra mampiavaka ny sensor dia mifandraika amin'ny famantarana static static, ny fivoahan'ny sensor ary ny input. Satria ny fidirana sy ny vokatra dia tsy miankina amin'ny fotoana amin'izao fotoana izao, ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo, izany hoe ny toetran'ny static an'ny ...
Fahalalana fampianarana fototra momba ny sensor (2)
Fanasokajiana ny sensor amin'izao fotoana izao, tsy misy fomba fanasokajy mitambatra ho an'ny sensor, fa ireto karazana telo manaraka ireto dia matetika ampiasaina: 1. Araka ny habetsaky ny sensor dia azo zaraina ho sensor toy ny famindra, ny hery, ny hafainganam-pandeha, ny hafanana, mikoriana, ary fitambarana entona ....
Fahalalana fampianarana fototra momba ny sensor
Fahalalana fototra momba ny fampianarana Sensor Famaritana sensor National Standard GB7665-87 dia mamaritra ny sensor ho: "Fitaovana na fitaovana azo refesina ary havadika ho fambara azo ampiasaina araky ny fitsipika iray, izay mazàna misy singa saro-pady sy singa fanovana". Ny sensor dia mamantatra ...
Fampidirana ireo terminolojian'ny sensor mahazatra (6)
26. tahan'ny intrinsika Rehefa tsy misy ny fanoherana, ny fahalalahan'ny sensor (tsy misy hery ivelany) manetsika ny tahan'ny. 27. Valiny Ny toetra izay refesina sy ovaina amin'ny fotoana famoahana. 28. Ny mari-pahaizana momba ny mari-pana dia manome alalana ny sensor hanaraka ny mari-pana compen ...
Fampidirana ireo terminolojian'ny sensor mahazatra (5)
20. Fihetseham-po mivezivezy fiovana amin'ny fiakaran'ny haavon'ny calibration noho ny fiovan'ny fahatsapana. 21. Fihetseham-po amin'ny hafanana mihetsiketsika noho ny fiovan'ny fahatsapana. 22. Fihetsiketsehana aotra aotra noho ny fiovan'ny mari-pana manodidina. 23. Linearity Ny mari-pahaizana izay ...
Fampidirana ireo terminolojian'ny sensor mahazatra (4)
14. Output zero raha eo ambanin'ny tanàna, ny refin'ny sensor dia refesina ho aotra. 15. Lag Ny fahasamihafana faran'izay betsaka mitranga amin'ny famoahana rehefa mitombo sy mihena ny sandan'ny refy mihoatra ny refy voalaza. 16. Farany Ny faharetan'ny fotoana amin'ny fiovan'ny signal output t ...
Fampidirana ireo terminolojian'ny sensor mahazatra (3)
8. Zava toerana A fanjakana izay ahena ny sandan'ny famoahana tanteraka toy ny fanjakana mandanjalanja. 9. Famporisihana Angovo ivelany (herinaratra na fantsona) ampiharina mba hampandeha tsara ilay sensor. 10. Famporisihana faran'izay avo indrindra Ny sanda faratampony amin'ny herinaratra fientanam-po na ny ankehitriny izay mety ...
Hall Effect Sensor ankehitriny, Hall Sensor ankehitriny, Hall Effect Ac Sensor ankehitriny, Sensor amin'izao fotoana izao, Fanjifana herinaratra ambany DC Sensor ankehitriny, Fahamarinana avo lenta Ac Sensor ankehitriny,